Sidee Loogu Soo Diraa Video Dheer WhatsApp? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loogu diraa fiidiyow dheer WhatsApp?
Waxaa laga yaabaa 7, 2021 0 comments 426
Mararka qaarkood markaan wadahadal kula jirno qof qaab rasmi ah ama aan rasmi ahayn, waxaan u baahannahay inaan u dirno fiidiyoow. Waxay kuxirantahay mudada, tayada iyo culeyska tan, waxaa macquul ah in loo diro iyadoo dhameystiran ama waa inaad dhowr jeer dirtaa tan iyo markii WhatsApp kuuma ogolaanayo inaad dirto muuqaal aad u dheer.
Laakiin maxay taasi u dhacday? Sababta fudud ee ah in codsigan uu leeyahay xad aad u weyn marka loo eego culeyska loo diri karo fiidiyowyada, sawirrada ama dukumiintiyada. Si ka duwan Telegram, oo aan lahayn dhibaatadan awoodna la wadaag fiidyowyada saacadaha haddii aad rabto.
In kasta oo xadidan ay WhatsApp leedahay, haddana waxaa jira dhowr waxyaalood oo kale oo aad codsan karto wakhti kasta oo aad rabto sidaasna aad awoodi karto inaad soo dirto fiidiyoow dheer adigoon u kala jarin dhawr qaybood. Joog ilaa dhamaadka oo waad ogaan doontaa.
Sideed muuqaal dheer ugu diri kartaa WhatsApp?
1. Adeegso xulashooyinka asalka ah ee arjiga
Markaan rabno u soo dir fiidiyow ama sawir WhatsApp xiriir gaar ah, badiyaa waxaan u tagnaa clip-ka ku yaal geeska meesha aan wax ku qorno oo aan ku xusho galabta. Halkaas waxaan ka raadineynaa fiidiyowga, sawirka ama sawirka aan dooneyno inaan dirno waxaanan ku sii socon doonnaa rarka.
In kasta oo aanu xumaan haba yaraatee, qaabkan loo diro faylasha ayaa leh waxyeellooyin. Mid ka mid ah ayaa ah in, marka laga hadlayo fiidiyowyada, aysan kuu oggolaanayn inaad mid dirto wax ka badan 3:22. Tani iyada oo aan la iska indhatirin in tayada waxyar luntay.
Habka ugu wax ku oolka badan ee lagu xallin karo dhibaatadan ayaa ah in halkii aad ka dooran lahayd Gallery, dooro Documents. Markaad sidan sameyso, guddi leh noocyo faylal ah ayaa soo muuqan doona. Waxaad dooranaysaa "raadso dukumiintiyo kale".
Sidan ayaad awoodi doontaa inaad ku sameyso baaritaan gaar ah feylka aad rabto inaad dirto, kiiskaaga waa fiidiyoow. Markaad hesho waad xulataa oo waad dirtaa. Markaad sameyso, waxaad ogaan doontaa taas halkii aad amri lahayd sidii caadiga ahayd, waxaad ku soo rari doontaa fariin qaab dukumiinti ah.
Maxay yihiin faa'iidooyinka ku jira dirista fiidiyoow qaab dokumenti ah
Waxaad leedahay faa'iido aan caadi aheyn oo ah in tayada aan lumin doonin ugu yaraan. Intaa waxaa dheer, iyadoon loo eegin dhererka fiidiyowga, waxaad u diri kartaa si deggan. Tanina kaliya laguma dabaqi karo fiidiyowyada, laakiin sidoo kale waxaad ku samayn kartaa sawirradaada ama sawirradaada haddii ay tahay ma doonaysid inay tayada lumiyaan.
2. Isticmaal codsi si aad u cadaadinaysid fiidiyaha
Kani waa mid ka mid ah waxyaabaha kale ee aad hirgelin karto illaa inta aad ka haysato meel ku filan mobilkaaga si aad ugu rakibto codsi cusub. Sidan oo kale, waxaa jira wax badan oo aad isticmaali karto. Taladayada ayaa ah inaad isticmaasho Video Compressor. Waa codsi aad u fudud in la fahmo lana isticmaalo.
Si aad u awooddo inaad ku cadaadin karto fiidiyoow aad rabto inaad dirto, kaliya waa inaad furtaa arjiga, raadsataa fiidiyaha aad xiiseyneyso, ka dibna dooro qiyamka ugu hooseeya ee riix ah ka dibna bilow inaad isku cadaadiso Waxa hadhay ayaa ah in la doorto isla faylka keenay isla markaana si deggan ugu dir WhatsApp.
1 Sideed muuqaal dheer ugu diri kartaa WhatsApp?
1.1 1. Adeegso xulashooyinka asalka ah ee arjiga
1.2 Maxay yihiin faa'iidooyinka ku jira dirista fiidiyoow qaab dokumenti ah
1.3 2. Isticmaal codsi si aad u cadaadinaysid fiidiyaha
Sidee looga tirtirayaa xiriirada WhatsApp?
Sidee wax loogu qoraa WhatsApp?